नेपाल भ्रमण वर्षको शुभारम्भ - प्रदेश एकमा के छ तयारी ? - Baikalpikkhabar
नेपाल भ्रमण वर्षको शुभारम्भ – प्रदेश एकमा के छ तयारी ?
सरकारले राष्ट्रिय महोत्सवकै रूपमा मनाउन लागेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को औपचारिक सुरुवात आजदेखि हुँदैछ । शुभारम्भ समारोहमा सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि हुनेछ । राष्ट्रिय गान सकिएलगत्तै बाजासहित रङ्गशालामा भ्रमण वर्ष २०२० को मानव साङ्लो बनाइनेछ । कुटुम्ब ब्याण्डको साङ्गीतिक प्रस्तुतिमा विभिन्न सङ्घ(संस्थाले परेड गर्नेछन् ।
यसैबीच नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन विभिन्न देशका विदेशी पाहुना काठमाण्डौ आइसकेका छन् । समारोहमा सहभागी हुन भारत, चीनसहित विभिन्न देशका पर्यटन मन्त्री तथा विशिष्ट पाहुना काठमाण्डौ आइपुगेका हुन् । भ्रमण वर्षको उद्घाटन कार्यक्रमका लागि दक्षिण एसियाली, मध्य(पूर्वी, युरोपलगायत देशका ३४ वटा सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधि नेपाल आइसकेका छन् ।
नेपाल सरकारले प्रदेश १ का विभिन्न स्थानका पर्यटकीय, धार्मिक र ऐतिहासिक क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा राखेको छ । जसमा ताप्लेजुङमा पाथीभरा, फुडफुडे झारना, ईलामको सन्दकपुर–माईपोखरी, संखुवासभाको अरुण उपत्यका, धनकुटाको भेडेटार, नमस्ते झरना, खोटाङको हलेसी महादेव, सोलुुखुम्बुको स्याङ्बोचे र सगरमाथा रहेका छन् । यस्तै ओखलढुङ्गाको पोकली झरना, झापाको बाँसबारी सिमसार पर्यटन पूर्वाधार केन्द्र, सुनसरीको कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, बराह क्षेत्र र तालतलैयालाई उत्कृष्ट गन्तव्य मानेको छ । त्यस्तै नयाँ तथा विकास गरिनुपर्ने गन्तव्यको सूचीमा ताप्लेजुङको तिङ्बुङ पोखरी, पाँचथरको फाल्गुनन्द सर्किट, ईलामको फिकल–कन्याम–श्रीअन्तु सर्किट, तेह्रथुमको तीनजुरे मिल्के जलजले रहेका छन् । संखुवासभाको बालेश्वर ऐतिहाँसिक गुफा, धनकुटाको हलदे पटकेडाँडा पर्यटन ट्रेल, भोजपुरको ट्याम्के डाँडा (मुन्धुम ट्रेयल), खोटाङको बराह पोखरी पनि पर्यटकीय गन्तव्यमा परेका छन् । ताप्लेजुङमा पाथीभरा, फुडफुडे झारना, ईलामको सन्दकपुर–माईपोखरी, संखुवासभाको अरुण उपत्यका, धनकुटाको भेडेटार, नमस्ते झरना, खोटाङको हलेसी महादेव, सोलुुखुम्बुको स्याङ्बोचे र सगरमाथा रहेका छन् ।
भ्रमण वर्षको अवसरमा सुनसरी र धनकुटाको सीमा क्षेत्रमा रहेको भेडेटारमा खाना महोत्सव (फुड फेस्टिभल)को तयारी भएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले पर्यटकीय स्थल भेडेटारमा अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२० को अवसरमा आठौँ खाना महोत्सवको आयोजना गरिने भएको हो । र्
बुधबार, १६ पुष, २०७६, बिहानको ११:५३ बजे